Mba hataovy matotra e ! | NewsMada
Andro vitsy izay no lasa tamin’ny fotoana fampielezan-kevitra amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity. Samy manao izay heveriny ho mety, na amin’ny toerana nosafidina haleha, amin’izao fiandohany izao, na amin’ny paikady enti-mandresy lahatra ny vahoaka, na amin’ny fitaovana ampiasaina ho fanatrarana izany… Samy manao izay tratry ny volany.
Toy ny mpijery baolina ny vahoaka, mitazana ny fihetsika entin’ireto kandidà milalao eny an-kianja, ka ao ny mihorakoraka sy mitehaka noho ny « fankafizana » ilay heveriny ho mendrika ho filoham-pirenena. Ao koa ny midanaka sy midiridiry, toa tsy mahafantatra na tsy mahazo loatra izay ambara aminy. Ary farany izay betsaka indrindra, ireo miandriandry, manantena hotolorana zavatra…
Ho an’ireo sokajin’olona telo ireo, tsy misy ny tena resy lahatra amin’ny fandaharanasa sy ny paikady entin’ilay kandidà mampandroso ny firenena? Asa fa toa samy manana ny tombontsoany: volakely, akanjo sy fanomezana madinidinika, fijerena fety… Raha izay firehana entin’ilay kandidà, toa mistery?
Etsy ankilan’izay, tsy vitsy ny manaraka akaiky ny zava-misy, amin’ny alalan’ny teknolojia, mihazakazaka sy mivoatra be, ankehitriny. Ao anatin’izany ny tambajotran-tserasera samihafa. Azo lazaina ho mizara roa ny toe-tsaina entin’ity sokajin’olona ity mijery ny zava-misy.
Ao aloha ireo manaraka ny “kandidàny” ka, na inona na inona lazain’ito farany, mety ary mahomby hatrany izany. Ary, na toy inona na toy inona endrika hitany amin’ireo fitetezam-paritra ataony, efa mahita fahombiazana sahady ilay tohanany, izay tena mandeha amin’ny fahamarinana, araka ny fijeriny.
Toe-tsaina iray hafa entin’ny sasany mijery ny tatitra mikasika ireny propagandy ireny koa ny mitsingoloka izay tsy mety na tsy ara-dalàna na koa mampihomehy fotsiny. Iny indray, avy eo, no aparitaka amin’ny hafa ary, matetika, miteraka resabe sy miitatra, toy ny sima misioka, araka ny fiteny.
Amin’ireo toe-tsaina roa samy hafa ireo, tsy tsapa loatra ny fahamatorana hamakafaka ny ho tohin’ny fihetsika kely tsy voahevitra, mety hiteraka korontana, amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Ny firenena anefa ity, efa latsaka an-kady, mila olona matotra: mpitondra mahay sy vonona ny hanatanteraka ny fampanantenany ary mitaky vahoaka hendry sy mahafehy tena, vonona hiala amin’ny fahazaran-dratsiny.